Ny hadalan'ny Apple Premium Reseller dia nirodana ivontoerana fiantsenana | Avy amin'ny mac aho
Ny fientanam-po amin'ny vokatra Apple dia tsy mitsahatra ny manaitra antsika ary ny mpivarotra Apple Premium, iray amin'ireo fivarotana izay na dia tsy tompon'ny Apple aza dia manam-pahaizana manokana amin'ny fivarotana vokatra Apple, miankina amin'ny Apple ihany koa ary tsy maintsy manohy ny fanaingoana. apetrak'i Apple amin'izy ireo, tonga tao an-tsain'izy ireo ny fanaovana fihenam-bidy amin'ny vokatra sasany, anisan'izany ny MacBook Air sy ny iMac, ankoatra ny hafa.
Izy io no hadalana lehibe indrindra hita tamin'io lafiny io ary izany dia ny firoboroboan'ny vinavina rehetra azo natao tamin'ity lafiny ity miaraka amin'ny vidiny toy izany dia teo an-tampon'ny fianjeran'ny olona tanteraka ny magazay.
Izahay dia miresaka momba ny varotra sasany hanadiovana tahiry izay nanapa-kevitra ny hanao ny Premium Reseller. Raha ny tena manokana, ny fihenam-bidy lehibe indrindra dia hita tao amin'ny iPhone 5S, izay hamidy amin'ny vidiny dimam-polo dolara. Ny tena marina dia vidin'ny telefaona iray izay mbola manome ady be foana ary mampifaly ny tompony ankehitriny. Toy izany ny hadalana nahatonga ny olona maherin'ny arivo sy iray alina nahasarika tambajotra sosialy nivory tao amin'ny foibe fiantsenana.
Raha ampianay izany dia nisy fihenam-bidy ihany koa ny vidin'ny MacBook Airs sasany tsy salama amin'ny $ 128 ary iMac taona vitsy lasa izay tamin'ny $ 255, nitombo ny hadalana ka tsy afaka nanokatra varavarana ny orinasa ary ny vahoaka manontolo dia voatery noroahin'ny filaminana.
Miaraka amin'ny fihetsika toy izao, azontsika atao ny mieritreritra raha tsy misy mpitantana ao amin'ireo magazay ireo izay mety mieritreritra fa ny eritreritra sasany dia mety hiteraka zava-doza satria mieritreritra isika fa noho ny lanjan'ireo olona arivo sy iray alina ireo, dia mety ho nirodana ny gorodon'ny foibe fiantsenana. ...
Ho hitantsika eo izany Mpivarotra Premium miverina amin'ny fanafihana miaraka amin'ny fampielezan-kevitr'ity dokambarotra ity raha mbola tsy mandrara azy ny tompon'ny foibe fiantsenana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Ny hadalan'ny Apple Premium Reseller dia nirodana ivontoerana fiantsenana